Fanaraha-maso ny fepetra famokarana zezika biolojika, amin'ny fampiharana, dia ny fifandraisan'ny toetra ara-batana sy biolojika amin'ny fizotran'ny antontam-bokatra. Amin'ny lafiny iray, ny fepetra fanaraha-maso dia mifangaro sy mifandrindra. Etsy ankilany, ny windrows samihafa dia mifangaro, noho ny natiora isan-karazany sy ny hafainganam-pandehan'ny fahasamihafana.
● Fanaraha-maso ny hamandoana
Ny hamandoana dia takiana lehibe amin'ny composting organika. Amin'ny fizotry ny zezika zezika, ny hamandoan'ny akora tany am-boalohany dia 40% ka hatramin'ny 70%, mba hiantohana ny fandrosoan'ny compost. Ny atin'ny hamandoana mety indrindra dia 60-70%. Ny hamandoana ara-nofo avo loatra na ambany loatra dia mety hisy fiatraikany amin'ny asa mikraoba aerobiotika ka tokony hatao ny lalàna mifehy ny rano alohan'ny fanamasinana. Rehefa latsaky ny 60% ny votoatin'ny hamandoana ara-nofo dia miadana ny hafanana, ambany ny mari-pana ary ambany ny mari-pahaizana momba ny lo. Ny hamandoana dia mihoatra ny 70%, misy fiatraikany amin'ny rivotra, izay miova ho anaerobic fermentation, miadana fanafanana ary ratsy lo.
Nasehon'ny fandinihana fa ny fampidirana rano ao anaty antontam-bokotra dia afaka hanafaingana ny fahamatoran'ny zezika sy ny fitoniana amin'ny fehezan-teny mavitrika indrindra. Ny haavon'ny rano dia tokony hijanona 50-60%. Ny hamandoana dia tokony ampiana aorian'izay dia tazonina amin'ny 40% ka hatramin'ny 50%, raha toa ka tsy tokony hivoaka. Ny hamandoana dia tokony fehezina ambanin'ny 30% amin'ny vokatra. Raha avo ny hamandoana dia tokony ho maina amin'ny hafanan'ny 80.
Ny mari-pana dia vokatry ny asan'ny zavamiaina bitika. Mamaritra ny fifandraisan'ny fitaovana. Amin'ny mari-pana 30 ~ 50 amin'ny dingana voalohany amin'ny antontam-bokin'ny zezika, ny hetsika mesophile dia mety hiteraka hafanana, ka mahatonga ny hafanan'ny zezika. Ny mari-pana optimum dia 55 ~ 60 ℃. Ny zavamiaina bitika thermophilic dia afaka manimba fitaovana biolojika marobe ary manimba haingana ny cellulose ao anatin'ny fotoana fohy. Ny mari-pana ambony dia ny fepetra ilaina amin'ny famonoana ireo fako misy poizina, ao anatin'izany ny pathogens, atody parasite ary voan-tsimparifary, sns. Amin'ny toe-javatra mahazatra, maharitra 2 ~ 3 herinandro ny famonoana ireo fako mampidi-doza amin'ny hafanan'ny 55 ℃, 65 ℃ mandritra ny 1 herinandro, na 70 ℃ mandritra ny ora maromaro.
Ny votoatin'ny hamandoana no anton-javatra misy fiatraikany amin'ny hafanan'ny zezika. Ny hamandoana be loatra dia mety hampihena ny hafanan'ny zezika. Ny fanitsiana ny hamandoana dia mitarika amin'ny fiakaran'ny hafanana amin'ny dingana manaraka ny zezika. Ny mari-pana dia azo ahena amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny atin'ny hamandoana, hisorohana ny hafanana ambony amin'ny dingan'ny zezika.
Ny composting dia singa iray hafa amin'ny fifehezana ny mari-pana. Ny composting dia afaka mifehy ny hafanan'ny fitaovana ary manatsara ny etona, manery ny rivotra amin'ny alàlan'ny antontam-bato. Izy io dia fomba mahomby amin'ny fampihenana ny mari-pana reactor amin'ny alàlan'ny fampiasanamilina fanodinana compost. Izy io dia miavaka amin'ny alàlan'ny fandidiana mora, ny vidiny ambany ary ny fahombiazana avo lenta. Ny fanitsiana ny fahita matetika amin'ny composting dia mifehy ny mari-pana sy ny fotoanan'ny mari-pana ambony indrindra.
● C / N fanaraha-maso tahan'ny
Rehefa mety ny tahan'ny C / N dia azo atao tsara ny mamokatra compost. Raha avo loatra ny tahan'ny C / N, noho ny tsy fisian'ny azota sy ny tontolo mitombo voafetra, dia miadana ny taham-pahavoazan'ny fako biolojika, ka miteraka fotoana lava hamoahana zezika. Raha ambany loatra ny tahan'ny C / N dia azo ampiasaina amin'ny fomba feno ny karbaona, very ny azota amin'ny endriny amin'ny amoniaka. Tsy miantraika amin'ny tontolo iainana fotsiny fa mampihena ny fahombiazan'ny zezika azota. Ny mikraoba dia manoratra protoplasm mikraoba mandritra ny fananganana compostie organika. Amin'ny lanjany maina, ny protoplasm dia misy karbaona 50%, azota 5% ary fôfatôfatra 25%. Noho izany, nanolo-kevitra ny mpikaroka fa 20-30% ny C / N compost mety.
Ny tahan'ny C / N an'ny zezika voajanahary dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fampidirana fitaovana izay misy karbaona avo na azota avo. Ny fitaovana sasany, toy ny mololo, tsimparifary, kitay ary ravina dia misy fibre, lignin ary pectin. Satria avo lenta C / N, dia azo ampiasaina ho fitaovana fampidirana karbaona avo lenta. Noho ny habetsaky ny azota avo dia avo ny zezika amin'ny biby fiompy. Ohatra, ny zezin-kisoa dia misy azota amoniôma izay misy amin'ny 80 isan-jaton'ny mikraoba, mba hampiroboroboana amin'ny fomba mahomby ny fitomboan'ny mikraoba sy ny fiterahana ary hanafainganana ny fahamatoran'ny zezika.Granulator zezika biolojika karazana vaovao dia mety amin'ity dingana ity. Rehefa miditra ao amin'ny masinina ireo fitaovana nipoitra dia azo ampiana arakaraka ny takiana samihafa.
● Ventilation sy oxygen manome
Izy io dia singa iray manan-danja amin'ny fananana zezika zezika mba hanana rivotra sy oxygen be dia be. Ny asany lehibe indrindra dia ny fanomezana oksizenina ilaina amin'ny fitomboan'ny mikraoba. Mifehy ny hafanan'ny fanehoan-kevitra amin'ny alàlan'ny fifehezana ny rivotra mba hahafahana mifehy ny mari-pana ambony indrindra amin'ny zezika sy ny fotoana nitrangan'izany. Raha mitazona ny toetr'andro mety indrindra, ny fampitomboana ny rivotra dia afaka manala ny hamandoana. Ny rivotra sy ny oxygen mety dia mampihena ny fahaverezan'ny azota, ny famokarana malodor ary ny hamandoana, izay mora ny mitahiry ireo vokatra fanodinana hafa.
Ny hamandoan'ny zezika dia misy fiatraikany amin'ny haidin'ny aeration sy ny fiasa mikraoba, izay hisy fiantraikany amin'ny fihinanana oksizenina. Izy io dia singa iray manapa-kevitra amin'ny composting aerobic. Mila mifehy ny hamandoana sy ny rivotra mifototra amin'ny fananan'ny fitaovana, hahatratrarana ny fandrindrana ny rano sy ny oxygen. Raha eo am-pandinihana ny roa dia afaka mampiroborobo ny fitomboan'ny mikraoba sy ny fiterahana ary manatsara ny fepetra fanaraha-maso.
Ny fandinihana dia naneho fa ny fanjifana oksizenina dia mitombo avo lenta ambanin'ny 60 ℃, ambany kokoa ny fanjifana mihoatra ny 60 ℃ ary manakaiky ny aotra mihoatra ny 70 ℃. Ny habetsaky ny rivotra ary ny oxygen dia tokony fehezina mifanaraka amin'ny maripana samihafa.
● fifehezana pH
Ny sanda pH dia misy fiantraikany amin'ny fizotry ny zezika. Amin'ny dingana voalohany amin'ny zezika, misy fiantraikany amin'ny fiasan'ny bakteria ny pH. Ohatra, ny pH = 6.0 no faritry ny fetin'ny kisoa matotra sy vovo-tsofa. Manakana ny dioksidan'ny karbaona sy ny famokarana hafanana amin'ny pH <6.0. Mitombo haingana dia haingana amin'ny dioksidan'ny karbaona sy ny famokarana hafanana ao amin'ny PH> 6. 0. Raha miditra amin'ny dingan'ny mari-pana ambony ianao, ny hetsika mitambatra amin'ny PH avo sy ny mari-pana ambony dia mitarika amin'ny fanalefahana amoniaka. Ny mikraoba dia mihena ho asidra organika miaraka amin'ny composting, miteraka fihenan'ny pH, ka hatramin'ny 5 na mahery. Ary avy eo miovaova ny asidra organika miovaova noho ny fiakaran'ny maripana. Mandritra izany fotoana izany, ny amoniaka, manimba ny zavamananaina, dia mampiakatra ny pH. Amin'ny farany, miorina amin'ny haavo avo lenta izy io. Ao amin'ny maripanan'ny hafanan'ny zezika, ny sanda pH amin'ny 7.5 ~ 8.5 dia mety hahatratra ny taham-pahavalanana farany ambony. Ny PH avo loatra koa dia mety hiteraka volatilization be loatra amin'ny amoniaka, amin'izay dia afaka mampihena ny pH amin'ny alàlan'ny fanampiana ny alimina sy asidra phosorika.
Raha fintinina, ny mifehy ny kalitaon'ny zezika dia tsy tsotra. Mora ihany ho an'ny a
fepetra tokana. Na izany aza, mifangaro ireo fitaovana mba hahatratrarana ny fanatsarana ny toetran'ny compost, ny fiaraha-miasa rehetra dia tokony hiaraha-miasa. Rehefa mety ny fepetra fanaraha-maso dia azo alamina tsara ny composting. Noho izany, nametraka fototra mafy orina hamokarana compost avo lenta izy io.